Madaxweynaha Jamhuuriyadda F.Somaliya oo kulan la qaatey Hillary Clinton (Daawo) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha Jamhuuriyadda F.Somaliya oo kulan la qaatey Hillary Clinton (Daawo)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda F.Somaliya oo kulan la qaatey Hillary Clinton (Daawo)
January 17, 2013 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud ayaa maanta kula kulmey xarunta Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Xoghayaha xilka ka degaysa Hillary Rodham Clinton.
Kulanka kadib waxaa Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud iyo Hillary Clinton la wada hadleen saxaafadda, waxaana ay ka jawaabeen su’aalo weriyaashu weydiiyeen.
Hillary Clinton ayaa sheegtey in bishii Janaayo 2009 al-Shabaab ay maamulayeen inta badan magaalada Muqdisho, Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxayna u muuqatey in ay qabsanayaan meelo kale, Dadka Soomaaliyeed waxa ay muddo dhibane u ahaayeen rabshado, waxaana dooney in arintaas isbedesho.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ayaa bilaabey in ay al-Shabaab banaanka uga saaraan magaalooyinka waaweyn, waxaana meelo kala duwan gaaraya gar-gaarka bini’aadanimo ayey tiri Hillary Clinton.
Muddo labaatan sano ah kadib dalka Soomaaliya waxa uu lee yahay dowlad si rasmi ah u metesha Soomaaliya, Madaxweyne cusub, Baarlamaan cusub, Raysalwasaare cusub iyo Dastuur cusub, Hillary ayaa hadalkeeda ku dartey in Soomaaliya ay haysato fursad cusub oo ay ku qorto bog cusub.
Hillary ayaa tiri waxaan maanta caddeyneynaa tan iyo 1991, in Dalka Maraykanku si dhab ah u aqoonsadey dowladda Soomaaliya.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa sheegtey in todobaadkii u danbeeyey ee xafiiska joogeyso ay ku soo aadey in Soomaaliya la aqoonsado waxaana ay sheegtey in xoghayaha cusub uu si wadi doono shaqada, Waxaana ay ballan qaadey in Maraykanku ahaan doono Jaal ama saaxiib adag oo Soomaaliya yeelato.
Kulankii Obama iyo Madaxweynaha Soomaaliya
Hillary ayaa sheeggtey in Madaxweynaha Soomaaliya uu maanta la kumay Madaxweyne Obama taasna ay ahayd farin adag oo loo direy bulshada Soomaaliyeed sida ay uga go’an tahay Maraykanka in uu garab istaago Soomaaliya, inkasta oo kulankaasi ahayn mid horey loo qorsheeyey ama official ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud oo isaguna ka hadley shirkii saxaafadda loo qabtey kulankii uu Hillary la qaatey kadib ayaa ugu horeyn u mahad celiyey dalka Maraykanka isaga oo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan marnaba hilmaami doonin gacantii Maraykanku ka geystey gar-gaarka Soomaaliya muddadii xaaladda ba’an ay ka taagneyd.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya maalinba maalinta ka danbesyey ay galayso Marxalad cusub, taas oo ah hormar ay kaga abxayso, Dagaalada, xagjirnimada iyo fawdada.
Waa markii u horeysey ee Dalka Maraykanku si rasmi ah u aqoonsado Soomaaliya kadib markii ay dhacdey Dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre (AUN), waxaana la sheegay in arintaani ay wax weyn ka caawin doonto Soomaaliya gaar ahaan hay’addaha la shaqeeya USAID oo markii hore ay ku adkeyd in ay toos ula shaqeeyaan, Sidoo kale hay’addaha Bangiga Adduunka iyo Hayadda lacagta adduunka ee IMF ayaa iyaguna si toos ah ula shaqeynaya Soomaaliya oo markii hore aan la shaqeyn jirin.
Dalka Japan ayaa bishii Disember go’aansadey in uu toos ula shaqeeyo dowladda Soomaaliya halka markii hore deeqaha uu marin jirey hay’adaha Qaramada Midoobey ee fadhiya dalka Kenya. Madaxda Soomaaliya ayaa rajeyneysa in dalal badan ay raacaan waddada Maraykanka iyo Japanka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud ayaa maanta ka qaybgalaya kulan ay soo qaban qaabisey hay’adda Center for Strategic & International Studies.
Muddada madaxweynuhu ku sugan yahay Maraykanka waxa uu la kulmi doonaan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan maraykanka gaar ahaan gobolka ay ugu badan yihiin ee Minnasota.